Published October 16, 2020 at 11:20 PM CDT
Saraakiisha caafimaadka ayaa leh iska ilaali saddexda C ’; dad badan, meelo kooban iyo xiriir dhow.
Isbitaalada ku yaal Iowa waxyar ayey hoos udhaceen kadib markay gaareen heer sare ku dhowaad maalin kasta toddobaadkan.
Gobolka ayaa soo wariyay 16 dhimasho dheeraad ah 24 saac gudahood, oo ay ku jiraan seddex ka mid ah Gobolka Woodbury iyo 1,300 oo kale oo la xaqiijiyay infekshannada.
Degmada Iskuulka Bulshada ee Magaalada Sioux waxay sii deysaa cusboonaysiinta kiiskeeda toddobaadlaha ah. Waxaa jira wadar ahaan tobaneeyo arday iyo xubno ka tirsan shaqaalaha oo imtixaan ka qaadaya sideed dhisme. Taasi waa isla tirada guud ee usbuucii ka horreeyay. Heerka sare ee degmadu wuxuu ahaa 32. Markan wax fasallo ah looma wareejin ka-jawaabidda xaaladaha degdegga ah ee barashada farsamada.
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu leeyahay kiisaska ku lug leh iskuulada waxay umuuqdaan inay ka yimaadeen waxqabadyo iyo dhacdooyin loo qorsheeyey meel ka baxsan fasalka sida soo dhaweynta arooska iyo dibad baxyada bulshada
Waxaa intaa dheer, kororka ugu weyn ee kiisaska cusub wuxuu ka yimaadaa qeybta da'da 20-ilaa-40-sano.
Warbixinta isbeddelka toddobaadlaha ee waaxda caafimaadka ayaa muujineysa kororka natiijooyinka baaritaanka togan kadib qashin-qub intii lagu jiray labadii toddobaad ee la soo dhaafay. Saraakiisha ayaa sheegay in u hogaansanaan la'aanta go'doominta iyo tilmaamaha karantiilku ay sabab u tahay tirada kiisaska cusub ee tirada badan.
Maalin gudaheed 1,400 kale oo Iowans ah ayaa laga helay cudurka coronavirus-ka cusub, oo ay ku jiraan ku dhowaad 90 oo ka tirsan Gobolka Woodbury. Waxaa…